Xisbiyada Mucaaradka iyo Miisaaniyadda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xisbiyada Mucaaradka iyo Miisaaniyadda
La daabacay måndag 16 april 2012 kl 13.57
Xisbiyada mucaaradka ayaa sidii la filayayba dhaleeceeyn dusha uga riday miisaaniyadda xilliga gu’ga ee dawladda, middaasina oo saaka la soo ban-dhigay.
Magadalena Andersson, ahna af-hayeen dhaqaalaha ee xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga ayaa qabta in miisaaniyadda dawladdu aaney ku sugneeyn tallaabooyin ama fikirro wax ku ool ah:
- Dawladdu kama aanay faa’iideeysan suurtagalka ah sidii ay ku soo ban-dhigi lahayd abuuritaanka shaqooyin hor leh iyo dhiiri-gelinta shirkado cusub. Waxaase miisaaniyadda ka muuqda baaritaanno iyo sheekooyin aan wax dhumuc ah lahayn.
Xisbiyada mucaaradka ayaa qudhooda soo ban-dhigi doona fikirrada miisaaniyadahooda, halka dawladdu isha ku hayso miisaaniyadda xilliga dayrta ee soo socota ayuu haddana xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadigu soo ban-dhiggiisa miisaaniyadda gu’ga kub allan-qaaday inuu la iman doono fikirro la taaban karo.
Sidaasi oo kale af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga Doogga Per Bolund ayaa qaba in dawladdu aanay ku soo ban-dhigin miisaaniyaddeeda gu’ga tallaabooyin wax ku ool ah:
- Waxaan ka xunnahaey in aanay dawladdu soo jeedin wax qorsheyaal ah ee la xiriira howlaha balballaaran ee looga fadhiyo sida ka muuqata dhaqaalaha dalka, tusaale ahaan shaqa-la’aanta ku baahday dhallin-yarada. Sidoo kale waxaa noo muuqda in aanay dawladdu miisaaniyad gelin howlaha cimillada loona baahnaan lahaa in lagu tallaabsado kuwaasina oo shaqooyin badan laga kasban lahaa.
Xisbiga bidixda ayaa jeclaan lahaa inuu arko maal-gelin ballaaran ee lagu sameeyo howlaha guud ee bulshada, sida dhismeyaasha, daryeelka waayeelka iyo wax-barashada. Erik Almqvist, ahna xubin ka tirsan xisbiga Sverigedimoqoraadiga ayaa sheegay inuu damacsan yahay in dhaqaale laga jaro howlaha ajaaniibta laguna maal-geliyo goobo kale:
- Haddii sida dawladdu qabto uu jiro ceel-lacageed aan gurin ee howlaha soo-galootiga, waxaa dhalaneeysa caqabadan oo kale iyo inaan dhaqaale loo hayn lagu miisaaniyad geliyo dardar-gelinta dhaqaalaha dalka. Iminkadan ayaa loo baahnaan lahaa in miisaaniyad-gelin lagu sameeyo howlaha abuuritaanka shaqo, kobaca wax-barasho iyo arrimmaha daruuriga. Waana mid aanay ka muuqan miisaaniyadda dawladda.